Vaovao - Karazana fiara iza no mora diovina?
Fitaovana isan-karazany sy fampiasa amin'ny gorodona amin'ny arofanina miaraka amin'ny fomba fanasana samy hafa.
Hafa ihany koa ny hamafin'ny fanasana, ny tsihy amin'ny fiara izao dia matetika miaraka amin'ireo fitaovana samihafa ireo: karipetra, tsihy fiara fingotra, tsihy fiara pvc ary tsihy fiara TPE / TPR.
Andao hazavao ny mahasamihafa ny fomba fanasan-jaza:
Karipetra fiara : ny ankamaroan'ny fivarotana fiara dia hanome karipetra miaraka amin'ny fiara rehefa mividy azy ianao, mety tsara amin'ny fiara izany, ary tsara tarehy aloha, nefa afaka volana vitsivitsy dia ho maloto be, ary sarotra ny manadio mazava be , tsy tantera-drano izy io, ary mila miandry ianao maina ny hamerenana azy any amin'ny fiaranao, tena tsy mora ny manao azy.
5D Maty gorodona fiara vita amin'ny fiara vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny PVC, Nalaza nandritra ny taona maro izy io, satria toa mats fiara lafo vidy ny hoditra, ankafizin'ny tompona fiara izy io tamin'ny taona lasa. Voapaika sy nozazaina tamin'ny maodelin'ny fiara izy, noho izany dia mety tsara amin'ny fiara ihany koa ary afaka mamokatra amin'ny MOQ ambany, izy io notapahina tamin'ny masinina fotsiny ary nanjaitra nataon'ny mpiasa, ny ozinina mats fiara rehetra dia afaka mamokatra ny maodelin'ny fiara rehetra. Fa ny tsihy vita amin'ny fiara vita amin'ny hoditra PVC dia mora manome fofona misy poizina amin'ny hafanana amin'ny fahavaratra, ary ho simba izany aorian'ny fanasana azy indraindray. Ka vitsy ny olona mampiasa azy izao.
Mats fiara fingotra, ny tombony lehibe indrindra dia ny vidiny mora vidy, ary azonao hokapaina mba hifanaraka amin'ny fiaranao, fa ity fitaovana ity dia tsy sariaka amin'ny tontolo iainana, ary aorian'ny fampiasanao azy amam-bolana dia hitresaka, miraikitra, manamafy, manalefaka, vovoka, tsy miloko, bobongolo, dia ho maloto be. Ka tsy soso-kevitra hampiasainay izao fampiasa gorodona fiara izao.
Ny fitaovana fiarovana ny tontolo iainana vaovao TPE, TPR dia be mpampiasa amin'ny gorodin'ny fiara. Ary tsy misy fofona amin'ny mari-pana avo lenta, azo averina, anti-slip, mahatohitra fitafiana, toetran'ny rano. Satria ny fitaovana TPE dia tsy mila agents additive.
Ary ny tsihy fiara TPE dia famolavolana 3D, misy endrika eo amboniny hanatsara ny herin'ny fikorontanana ary ny lafiny avo manodidina dia afaka misoroka ny fivoahan'ny rano tady, miaro ny fiara ao anatiny. Ny lesoka amin'ny tsihy fiara TPE dia mila mamolavola bobongolo ho an'ny fiara isan-karazany, mila fotoana maharitra ary lafo be ny fampivoarana azy. Raha mahita ny tsihy fiara ilainao amin'ny fitaovana TPE eny an-tsena ianao, aza misalasala manafatra azy, dia tena hivarotra azy tokoa ianao.
Ambonin'ny zava-drehetra, ny tsihy fiara TPE sy TPR dia mora diovina ary mety indrindra ho an'ny fianakaviana manan-janaka, tsy mampidi-doza amin'ny fahasalamana izany.
Hanangona fotoana hanasana ny tsihy fiara TPE ianao, mila 2 minitra fotsiny vao hosasana madio tsara.
Tsihy fiara TPE no tsihy fiara madio mora indrindra.
Fotoana fandefasana: Feb-09-2021
Ahoana ny fampiasana ny matanao amin'ny gorodon'ny fiara mandritra ny 20 eny ...